Umsolwa nommangali bavule isifuba ‘ngokushaywa kuka-Cici ngu-Arthur’ | News24
Umsolwa nommangali bavule isifuba ‘ngokushaywa kuka-Cici ngu-Arthur’
Cape Town – Inkakha yomculi weKwaito ophinde abe ngumlingisi, u-Arthur Mafokate kanye nesinqandamathe sakhe esingumculi, uCiCi, sebevule isifuba kulandela ukuvela kwemibiko yokuthi u-Arthur washaya uCici.
Lokhu kwathusa abantu abaningi njengoba lezi zithandani zazithathwa njengabantu abajabulile.
Babonakala behamba ndawonye ngonyaka odlule ngesikhathi uCiCi ewina indondo yeBest RnB Album and Best Styled Artist kuma-Metro FM Awards kanjalo nakulo nyaka emcimbini wama-Sama.
Ngemuva kokusabalala kwale mibiko laba bobabili sebephumele obala babeka izinhlangothi zabo ngokwehlukana.
OLUNYE UDABA: Izinxushuxhushu ngohambo lukaBabes Wodumo
U-Arthur ube nengxoxo nephephabhuku iDrum kanti uCiCi yena ukhiphe isitatimende ezinkundleni zokuxhumana.
Engxoxweni yakhe ne-Drum, u-Arthur uthe yena akasiyena umhlukumezi kodwa wavuma ukuthi kwaba khona “isigameko” wabe esethi: “Okunguhlukumezayo ukuthi ihora ngaphambi kwesigameko sasisothandweni futhi sangana. Isigameko senzeka futhi impilo yami yashintsha.”
Esitatimendeni asikhiphe ezinkundleni zokuxhumana ngoLwesithathu, uCiCi uthe: “Ngiyazichitha izinsolo zokuthi mina noMnumzane Arthur Mafokate sesixolelene futhi sakudlulisa okwenzeka.
"Ngiphinda ngiyazichitha izinsolo zokuthi ngiwahoxisile amacala abekwe u-Arthur njengoba kubikiwe kwabezindaba.
"Ngokwazi kwami, amacala abekwe u-Arthur asaqhubeka futhi anginazo izinhloso zokuwahoxisa.”
Zifundele lesi sitatimende esiphelele ngezansi: